R-isitayela (Earl isitayela) ikhadi [ezikhanyisayo lesikweletu kuphela]
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ R-isitayela (Earl isitayela) ikhadi [ezikhanyisayo lesikweletu kuphela]
ibhalansi slide oyinhloko isithakazelo flat-rate ezikhanyisayo credit. 10,000 yen mkhawulo we inkokhelo ethile ngenyanga, 20,000 yen, kusuka phakathi yen 30,000, izodluliselwa ngenyanga ezayo uma imali ikhadi ingaphezu inani elinqunyiwe lemali. Uma usebenzisa i-100,000 yen isethelwe yen 10,000 Yiqiniso inkokhelo yanyanga zonke, isithakazelo kuyoba 1250 yen iphindwe 1.25%, ukuze 8750 yen lokususa 1250 yen kusukela 10,000 yen sokukhokha isikweletu siba uthishanhloko it izonikezwa.
yen 60 kusuka 400,000 yen
R-isitayela (Earl isitayela) Ikhadi ikhadi ribonucleic ozinikele ezikhishwa Jack lomthengi credit giant. Imali ubulungu Lonyaka imahhala yonke indlela kusukela onyakeni wokuqala. Kuthatha isithakazelo ribonucleic kusukela okokuqala. Uma uxhumana no-call centre uma lidlula
umkhawulo wesikweletu, ungakwazi ukukhokha kusengaphambili. Icaciswe inkokhelo noma ibhonasi yinhlama-sum yokukhokha ezikhanyisayo credit ezinye izindlela zokukhokha eyodwa, njengabangane, kuphela ukwethula, kuyoba ngokuzenzakalela ezikhanyisayo ukwelashwa ngesikweletu.
usefunde iphuzu Lovely uyilungelo
Jacks iphuzu uhlelo, uma kuqhathaniswa nezinye Jacks Ukukhishwa ikhadi uyoba amaphuzu kabili. Kungenzeka ukuba ugcine yileyo naleyo 2 amaphuzu 200 yen, isilinganiso ukunciphisa uhlale 1%. Leli phuzu kungenziwa umklomelo-ANA zamakhilomitha noma Jal Mileage Bank, DoCoMo iphuzu, T iphuzu, kuyinto okulula ukusetshenziswa ikhadi ezinhle.
Nokho, ukukhetha inkokhelo egcwele ngesikhathi kuqala ukuze ugweme inzalo ka ezikhanyisayo credit, umphakathi ukusebenzisa okuqukethwe ezikhanyisayo credit isithakazelo 1. 25% isibe Imigomo uqinisekile esiningi. Kukhona inkonzo lokuchibiyela elibizwa ukuthula net amasevisi engqondweni njengoba ukukhwabanisa izinyathelo ngesikhathi online, ngokuvamile inkampani Ikhredithi kimi isinxephezelo, isinxephezelo uma ukusetshenziswa okungagunyaziwe inombolo ikhadi ku-intanethi bebelokhu ezivelayo.
Imali yonyaka njengoba izinzuzo enkulu ukuthi umshwalense travel kwezilwandle mahhala ingavele ezivelayo. Ngakho-ke, kuyasiza njengoba ikhadi ukuze uwasebenzise njengasemuva wokuvakasha i kwezilwandle. Ngoba othomathikhi ezivelayo, umphumela uyafana ukuthi eziqukethwe umshwalense labetibambile ShichiEru kuphela.
afana umshwalense, ezifana izipho ukuhamba inkampani, into efanayo njengoba isinxephezelo for umonakalo yengozi kanye nokwelashwa ukugula izindleko wemithwalo kuthiwa plus, sahlanganyela yomshuwalense ezidingwa yi-travel phesheya kuphela kuzoba.
isicelo ziqu kufanele kube uyakwazi kwabantu ngobudala ifoni eyi-18 ubudala noma ngaphezulu, ungabhalisa umfundi. Uma ucabangela futhi ndawonye kuba nezilandiso nge iphuzu ANA Jal, ungasho yini ukuthi izinto ikhadi ukuthi kufanelekile abantu abaya ngokuvamile phesheya.
ekhaya aphesheya, izinto athengwe ku-ikhadi R-isitayela, futhi inkonzo ngokuthi ukuvikelwa yezitolo isinxephezelo umonakalo, ezifana umonakalo noma ukweba okubangelwa ngengozi ngephutha izinsuku ezingu-90 kusukela osukwini othenge engafinyelela kwengu-1 million yen ngonyaka kuba ezivelayo.
Ungaphinda ungeze ikhadi NJLL, ukuhamba abantu ozithandayo futhi, Kuyinto efanelekayo abantu abanjalo bezikhandla. Ukuthenga Ukuvikelwa ngisho izibuyekezo ziye kakhulu esikalini, idumela futhi kukhona umuzwa wokulondeka esitolo. System ngokuthi J edepho mobile sikuthathe lokukhokhisa Pop nazo eyayithandwa okusezingeni eliphezulu exchange rate. Wayefana yomshwalense, futhi isinxephezelo plus ngokona yokulimala, izindleko ukwelashwa ukugula futhi wempahla, umphumela uyafana umshwalense kudingwa travel phesheya nje ukuba.
Ungaphinda ungeze ikhadi NJLL, ukuhamba abantu ozithandayo futhi, Kuyinto efanelekayo abantu abanjalo bezikhandla. Ukuthenga Ukuvikelwa ngisho izibuyekezo ziye kakhulu esikalini, idumela futhi kukhona umuzwa wokulondeka esitolo. System ngokuthi J edepho mobile sikuthathe lokukhokhisa Pop nazo eyayithandwa okusezingeni eliphezulu exchange rate. Line abantu ozithandayo futhi, thina Site abantu abanjalo bezikhandla. Ukuthenga Ukuvikelwa ngisho izibuyekezo ziye kakhulu esikalini, idumela futhi kukhona umuzwa wokulondeka esitolo. System ngokuthi J edepho mobile sikuthathe lokukhokhisa Pop nazo eyayithandwa okusezingeni eliphezulu exchange rate. Line abantu ozithandayo futhi, thina Site abantu abanjalo bezikhandla. Ukuthenga Ukuvikelwa ngisho izibuyekezo ziye kakhulu esikalini, idumela futhi kukhona umuzwa wokulondeka esitolo. System ngokuthi J edepho mobile sikuthathe lokukhokhisa Pop nazo eyayithandwa okusezingeni eliphezulu exchange rate.